Business Development Strategies and Australia Education for all Myanmar (Free seminar) | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Business Development Strategies and Australia Education for all Myanmar (Free seminar)
Posted on February 22, 2018 by MYEO in Local //0Comments
Deadline: 23 February 2018 (Friday) (5:00 PM)
Seminar Room, Nanyeng International College (NIC)
No.124 (c), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon
(Free Registration)11:30 AM – 12:00 PM
(Seminar) 12:00 PM – 2:00 PM
လုပ်ငန်းရှင်များ၊ Entrepreneur များ ၊ Management Level များနှင့် Management Level သို့ တက်လှမ်း လိုသူများ အတွက် ရည်ရွယ်၍ Business Development Strategies အကြောင်း သိကောင်းစရာ များအား Professor. Dr. Aung Tun Thet မှဟောပြော ပို့ချပြီး ၊
Australia (University Rank 24) ရှိသည့် Murdoch University, Australia ရဲ့ Study Grant Program နှင့် သိကောင်းစရာ များအား Dr. Win Min Thein နှင့် Mr. Bala (LEB) တို့မှ ဆွေးနွေး ပြောကြားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်နားဆင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါရန် ခင်မင်ရင်းနှီး စွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ် ပါသည်။
လုပျငနျးရှငျမြား၊ Entrepreneur မြား ၊ Management Level မြားနှငျ့ Management Level သို့ တကျလှမျး လိုသူမြား အတှကျ ရညျရှယျ၍ Business Development Strategies အကွောငျး သိကောငျးစရာ မြားအား Professor. Dr. Aung Tun Thet မှဟောပွော ပို့ခပြွီး ၊
Australia (University Rank 24) ရှိသညျ့ Murdoch University, Australia ရဲ့ Study Grant Program နှငျ့ သိကောငျးစရာ မြားအား Dr. Win Min Thein နှငျ့ Mr. Bala (LEB) တို့မှ ဆှေးနှေး ပွောကွားမညျ ဖွဈပါသဖွငျ့ တကျရောကျနားဆငျဆှေးနှေးနိုငျပါရနျ ခငျမငျရငျးနှီး စှာဖွငျ့ ဖိတျကွားအပျ ပါသညျ။
• Professor. Dr. Aung Tun Thet
• Dr. Win Min Thein (MD, Nanyeng International College)
• Mr. Bala (Director, London Examination Board)